PengPod Ny vahaolana ho antsika izay maniry takelaka finday? | Avy amin'ny Linux
PengPod Ny vahaolana ho antsika izay maniry takelaka finday?
Nano | | GNU / Linux, About us, hafa
Tsy isalasalana fa mihevitra ny tenako ho toy ny olona iray manandrana zava-baovao aho ary ny marina dia, takelaka misarika ny saiko ho toy ny fitaovana kely mety ho ilaina amin'ny zavatra isan'andro, tsy holaviko izany, mila iray ho fialam-boly aho ary hanamora ny asa Tsotra ihany koa, tsara, tiako ny fahafahan'ny mamaky nefa tsy mila boky sy famerenana zavatra maro.
Ny olako amin'ny takelaka dia ny fitambarako "Miady aminao" araka ny lazain'izy ireo any amin'ny taniko, taolana: Tsy manam-bola aho. Midika izany fa tsy afaka mampiasa takelaka mendrika aho, misy ny safidy sinoa faran'izay mora vidy saingy ny marina dia tsy misy manintona ny saiko ary, ireo tiako "mora azo" kokoa dia mbola tsy midina. 250 $ zavatra iray miaraka amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny fanovana ny dolara ao amin'ny fireneko ary ny famerana ny fifehezana vola ... sarotra avy eo.
Na izany na tsy izany, namaky nandritra ny andro maromaro aho momba ny karazana takelaka iray izay azo inoana fa afaka manova an'ity karazana toe-javatra ity ary maneho solosaina mahaliana ho an'ireo mpampiasa Linux sy ho an'ireo mpampiasa tsy Linux izay te hanova toerana kely sy hanakorontana miaraka amina fitaovana iray: PengPod. PengPod dia tetikasa iray mitady hivarotra endrika takelaka roa ary «PCpendrive»(Raha te hiantso azy ireo aho) izay miasa amin'ny Linux dualboot ary Android 4.0.
Fotoana lasa izay dia nitady famatsiam-bola tamin'ny alàlan'ny IndieGoGo ary efa tratran'izy ireo izany, ka mitohy mandroso ny tetikasa ary azon'izy ireo atao mialoha ny manafatra ny vokatra izay raha ny teoria dia tokony hamidy vantany vao ny telovolana voalohany 2013 (raha velona isika). Raha fintinina, tsy momba ny vaovao ilay zavatra fa miresaka momba zavatra manan-danja satria manohina kely ilay lohahevitra io elav Hoy izy nanontany momba ny takelaka Fa atao inona ny takelaka? ary ny marina dia izay Inona no tena ilana ny takelaka? Amin'izay ananantsika androany ny valiny dia: tsy mamokatra mihitsy matotra, tsy misy zavatra tena mamokatra mivoaka avy amin'ireo fitaovana ireo, tsy farafaharatsiny eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana, angamba ny fampiharana azy ireo amin'ny fanabeazana sy ny fampiasana azy ireo amin'ny famoronana, fa tsy izany no izy; Ny tiana hambara dia Inona izany ho ahy matihanina? Inona no manakana ny smartphone tsy hataony? Satria mijery ny mailako avy amin'ny finday avo lenta aho, toy ny tamba-jotra sosialy, mijery horonantsary, mampiasa hafatra, maka sary, mijery Internet Inona no mahatsara ny takelaka vita tsara noho ny finday avo lenta ankoatry ny lehibe kokoa ary mamela ahy hamaky tsara kokoa? INONA!?... ireo no fanontaniana nampijaly ahy foana, satria ny tena izy dia manompo ahy tsara kokoa ny solosaina finday, mamela ahy hitondra ny asako na aiza na aiza, miasa miaraka amin'ny birao mandeha amin'ny birao, mifampiresaka aminy amin'izay tiako, manana kitendry ary mazava ho azy, programa ... ny takelaka iray dia tsy manao an'izany na dia amin'ny nofy aza.
Saingy rehefa avy nandany fotoana nijerena ny PengPod Tsapako fa raha ny marina, ny takelaka toa izany dia tsy ny olana fa ny mpanamboatra sy ny rafitra ampiasainy Nahoana? tsotra: tsy afaka mividy takelaka ianao, ohatra, ipad ary avy eo avy eo mividy keyboard USB ary ampifandraiso izany, tokony ho iray manokana ho an'ny i-zavatra izany. Miaraka amin'ny takelaka Android Miankina amin'ny mpanamboatra azy io, satria maro no mandà ny hampiditra fampidirana USB 2.0 mahazatra sy ankehitriny ary mametraka ny micro USB na tsy manao izany tsotra izao izy ireo, na dia mora kokoa aza ny mitsabo azy noho ny i-zavatra, dia mbola fanaintainana amin'ny testicle ihany. lehibe lehibe. Ny olana hafa dia ny rafitra; Inona no azontsika isafidianana? IOS sy ny fameperana lehibe izay mamaritra: «Na manao zavatra amin'ny fomba nolazaiko ianao, na tsy tianao ... ary tsy maintsy tianao izany, dia tokony hivavaka amiko ianao amin'izany izay mahasosotra tokoa ny fahazoana rindrambaiko maimaim-poana izay miasa ho an'ny famokarana toy ny sarotra ihany ny mahazo zavatra hatao amin'ny programa; ohatra:
Ary manana isika Android, na dia misokatra be kokoa aza izy io, lehibe ary izay rehetra tadiavintsika, dia mijaly amin'ny zavatra maro izay IOS: Tsy dia misy zavatra maimaim-poana loatra hamokatra ary maro amin'ireo misy, raha ny marina dia tsy ilaina amin'ny zavatra marobe (mpikarakara, efitrano birao ary zavatra hafa kely ...) ankoatr'izay dia tsy hahazo mpamoaka kaody tena izy na tsy misy mamokatra ho an'ny saha tadiaviko.
PengPod toa ny vahaolana, ary lazaiko fa toa izany satria mbola tsy misy mivaingana na tsy nikasika ny iray hanapahana hevitra aho na tsia. Ireo fitaovana ireo dia mandingana ny fameperana nataon'ny mpanamboatra amin'ny sehatry ny hardware satria misy fidirana USB 2.0 generika roa ary koa output HDMI ary karazana endrika roa: 7 sy 10 santimetatra. Rehefa miresaka momba ny fitaovana finday isika, ny takelaka roa dia misy ARM Cortex A8 mono inti amin'ny 1.2 ghz sy 1gb RAM misy Mali 400 GPU, izay mamela azy hanana 3D hafainganam-pandeha sy mampiseho horonantsary amin'ny vahaolana avo lenta, izany rehetra izany dia $ 120 (7 santimetatra) ary 190 $ (10 santimetatra). Noho izany etsy ambony dia azontsika atao ny mahatsikaritra fa, farafaharatsiny azontsika atao ny misoroka ny famerana voatahy ary afaka mametraka izay tadiavintsika amin'ny USB. Io dia mamela ahy hametaka totozy sy fitendry amin'ny takelaka kely (ilay 10-inch iray) ary hamadika azy io ho toy ny netbook mahery na kely kokoa, saingy mazava ho azy, misy pitsopitsony tsy hita ... ny rindrambaiko.
Ireo fitaovana ireo dia mihazakazaka miaraka amin'ny dualboot an'ny Android y Linux toy izany. Efa noresahiko teo aloha io saingy tsy maintsy lazaiko fa, ny marina dia tsy miraharaha aho fa manana Android satria tsy mitady an'izany aho, mitady hanana hybrid marina eo anelanelan'ny takelaka sy ny netbook izay miara-miasa Linux. Avy amin'izay nahitako fahitana hatreto dia ho avy izy ireo miaraka amina plasma Active efa niorina tamina fotony OpenSuse, tena mahomby amin'ny fahitako azy na dia tsy fantatro aza ny fanatsarana azy OpenSuse Hihazakazaka amin'ny tontolo ARM, ny zavatra dia izao aloha no drafitra. Ary fantatrao inona? … Tiako ity.
Tiako izany satria raha tena azo ovaovana ny rafitra mba hihazakazahana tsara dia ho azoko atao eo am-pelatanako fitaovana hybrid izay hahafahako manao izay tiako atao: ento any amin'ny toerana itiavako azy ny plastika sy ny silikoko. ny kitendry anao, apetraho izay tianao rehetra avy amin'ny tahiry (izay miasa amin'ny ARM) ary miasa na miasa na manova lahatsoratra na manoratra ho an'ny Avy amin'ny Linux sns, ny tiako holazaina dia hoe inona no ampiasaiko takelaka. Ary avy eo, raha tiako ny mampiasa azy io ho takelaka fanaovana tranonkala kely fotsiny, mamaky feed na boky, Tsara izany, vanim-potoana ary izay ilay izy, tsotra be io.
Tsy mody manisa ny vorona alohan'ny foy aho ary tsy te ho futurologist fa miteny fotsiny aho fa raha tena vita araka ny tokony ho izy dia mifanaraka tsara amin'ny zavatra ilaiko izany sy ny an'ny maro hafa. Angamba tsy ny fifaninanana takelaka goavam-be izany na koa tsy fananana tombony tokony hanaovan'ireo mpanamboatra lehibe dokambarotra ny tenany, fa ny tena marina dia izany rehetra izany dokambarotra izany, satria manompo ahy izay ampiasako izy ireo mba hihodina ao am-baravarankely; na fofona na feo ...
Ny fotoana no hiteniteny ny zava-drehetra. Ahoana ny hevitrao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » PengPod Ny vahaolana ho antsika izay maniry takelaka finday?
harima dia hoy izy:
Raha ny tena izy, ny takelaka dia tsy mahasoa na inona na inona mamokatra, fa raha fialam-boly, manana 8 ″ aho ary mamaky manga ary milalao tsara indraindray ny lalao kely, raha ampiana ireo izay mandeha be (talohan'ny nahalany ahy adiny 1 mody any an-trano) ny fijerena fizarana 1 na 2 amin'ny andiany iray dia mahatonga ny dia hahafinaritra kokoa, hamaky ny marina fa tsy dia ampiasaina loatra izany raha tsy hoe misy sary pdf izy ireo raha tsy izany dia tsara kokoa ny mandrehitra. Ny lohahevitr'ireo finday avo lenta, manana iray miaraka amin'ny windows phone 7 omeko ahy any am-piasana aho fa tsy manome na inona na inona ny efijery, ankoatry ny lalao dia tsara kokoa amin'ny android.
Mamaly an'i harima
Toa mampanantena izany, novakiako tany ho any fa nampiasa plasma mavitrika izy io, tsy maintsy ho tsara. Ary ny masontsivana koa, tsara toa izany.
Ny hevitro? Te hivarotra takelaka havia sy havanana izy ireo ary toa tsy misy afaka miaina tsy misy izany intsony. (Aza raisina amin'ny fomba diso nano, afaka manao izay tiany ny olona tsirairay ary mampiditra ny volany amin'izay tiany).
Ho ahy dia tsy resaka vidiny, OS, na fampiasa izany. Ny takelaka iray anio dia TSY manolo solosaina PC, kely kokoa (araka ny nasongadin'i elav tamin'ny andro hafa, sy ny voalaza tao amin'ity lahatsoratra ity).
Aleo hazavaiko, ny takelaka dia natao handany atiny, hijery boky, magazine, fampiharana, sarimihetsika; Na tiantsika izany na tsia, dia izany tokoa. Ary tena tonga izy ireo nameno banga izay tsy nila nofenoina tsotra izao.
1) Iza no te-hiaina tontolo andro mifandray amin'ny tambajotra sosialy, mail sns. manana ny smartphone.
2) Iza no mieritreritra fa ho afaka hamaky boky amin'ny takelaka izy, hangataka fotoana amin'ny dokotera maso, ary koa, tsy misy vokatra izay manao an'izany mazava tsara sy miaraka amin'ny efijery voaomana amin'izany? Ilay boky.
3) Raha hijery sarimihetsika, andian-tsarimihetsika sy ny hafa ... manana ny solosaina finday, fahitalavitra, ...
Ary na dia miaraka amin'ny Linux aza ity takelaka ity, ary mampanantena fahagagana arivo, dia tena hafa koa ny tena izy. Tsy afaka mametraka izay tadiavinay izahay satria kely kokoa ny repositories an'ny ARM (mampiasa ARM amin'ny voaroy voaroy aho). Ary ny fampifandraisana ny klavie amin'ny takelaka dia hiverina amin'ilay olana mitovy amin'ny taloha ihany isika, efa misy ny vokatra izay manao izany, ny netbook.
Mampalahelo fa hihaona amin'ny takelaka iray daholo isika, ary angamba afaka taona vitsivitsy dia hanjavona ilay pc araka ny fantantsika. Saingy androany, manandrana mivarotra antsika ny fivezivezena sy "fiononana" fotsiny izy ireo izay arak'izy ireo omen'ny takelaka. Mba hahafahanao mihinana ary mifandray foana amin'ny zavatra rehetra. Ary izy ireo koa dia manandrana mivarotra izany amintsika ho toy ny endrika fialamboly rehefa ny tena izy dia efa misy fitaovana manao an'izany, consoles.
Miala tsiny fa tsy fohy aho, saingy tsy maintsy nivoaka aho. Ho ahy kosa, manantena aho fa handany taona maro vao hanana takelaka. Faly aho amin'ny PC misy ahy afaka manao izay tiako hatao ary na dia miaiky aza aho fa mety hahasosotra ny fitondrana izany dia misy solosaina finday maivana kokoa izay mety hisolo ny toeran'ny takelaka.
Na izany na tsy izany, lahatsoratra iray tena tsara izy io ary fomba fijery tena hajaina. Na dia netbook aza ny tolo-kevitro fa tsy takelaka.
dia izay miresaka momba ny takelaka hahahahahaha dia fanitaran-javatra be loatra amin'ny rehetra ho an'ity karazana fitaovana ity, izay mahatonga antsika tsy mahita torimaso sy fahakiviana xD (azafady ny fanesoana voajanahary)
Tsy raharahako hoe inona izy ireo, raha mahita zavatra mahasoa aho, dia mety amiko io ary ankehitriny, heveriko fa mety hahasoa ilay takelaka raha mbola hitanao fa mahasoa azy io, jereo raha omena xbox, wii na toby filalaovana izy ireo Ny hany hampiasaiko dia ny mivarotra azy
Toy izao ny fiarahamonina ankehitriny: ny fanjifana betsaka, miasa izahay mba hamoronana ireo zavatra izay "tsy maintsy" anananay ary avy eo ariana mba hananana bebe kokoa ... .. ary ambonin'izany dia amidiny lafo kokoa aminao ny zavatra rehetra, raha misy mitaky ny fitarainantsika dia io no rafitra ara-toekarena-ara-tsosialy…. fa momba ny teknolojia ity bilaogy ity fa tsy momba ny politika hahaha
farafaharatsiny faly aho fa amidy amin'ny vidiny ambany izy io, ka ho maro kokoa ny olona mampiasa linux 😀
mamela anao aho Tesla, tsy mba hamaly anao io fanehoan-kevitra io, fa ny fidiran'ny bilaogy, ny hadisoako> _>
Androany vao namaky lahatsoratra iray momba ny tetik'asa mitohy any India aho izay mikendry ny hanome ny mpianatra takelaka omena vola $ 20 USD (antsasaky ny vidin'ny famokarana), nefa izany ihany Ny orinasa dia hanao lisitra azy amidy amin'ny tsena hafa amin'ny $ 45 USD. Ny tena mahaliana, araka ny hevitro, momba ny inona no natsangana tao amin'ilay lahatsoratra, dia ny fampiasana izay hitan'izy ireo ho an'ireo fitaovana ireo amin'ny sehatry ny fanabeazana ary ho fitaovana fampidirana ireo teknolojia IT any amin'ireo firenena vao misondrotra izay tsy ananan'ny ankamaroan'ny mponina na PC na kahie na zavatra mitovy amin'izany. Na izany na tsy izany, zavatra iray hafa tsy misy ilana azy io, miankina amin'ny toe-javatra sy ny fahafahan'ny mpampiasa fotsiny izany.
Miombon-kevitra amin'i nano aho amin'ny antony sasany tiako hananana iray, fa ny tena ao amin'ilay «lisitra faniriako» ho laharam-pahamehana dia ny mpamaky e-book, ny tsotra kokoa no tsara kokoa, andao hojerentsika raha afaka mamaky iray aho efijery mendrika ary azoko atao ny mamela ny iPAQ izay ampiasaiko amin'izany ary lany ny masoko, saingy hey, tsy maintsy miandry ny fotoana tsara kokoa.
Ho an'ireo izay liana, ny rohy amin'ilay lahatsoratra tiako horesahina dia ireto manaraka ireto:
Tena mamporisika azy aho ...
Andraso ny famoahana azy amin'ny volana Janoary ary ho hitako izay eritreritry ny olona, ​​fa raha mametra ny tenako amin'izay voasoratra aho dia tsara izany
Tiako ilay hevitra… fa araka ny filazan'i Nano, aza isaina ireo akoho mandra-pahatapiny ny atody… na raha tsy manorotoro anay izy ireo. Kilasy tsara!
Hametraka "+1" avy amin'ny Google na "like" avy amin'ny FB aho, nefa lazao amiko ny antony tsy anananay ireo plugins ireo ??? Moa ve tsy hanampy bebe kokoa ny fanaparitahana an'ity atiny ity amin'ny motera fikarohana ???
Efa ela ny mpamorona OpenSUSE no namonosana fitaovana ARM, ny 12.2 ankehitriny dia efa manome fanohanana an'ireo fitaovana ireo.
Afaka mitsidika ny vavahady ARM amin'ny tranokalany izy ireo:
Angamba ity mahaliana anao amin'izao fotoana izao amin'ny Android fotsiny fa amin'ny pendrive dia azonao atao ny mametraka amin'ny windows raha mila XD ianao.
(Tsy dia fantatro loatra ny antony hametrahana windows amin'ny takelaka fa tiako ny manana safidy hafa)
Na eo aza izany, jereo ity takelaka ity amin'izao fotoana izao, any Guatemala, El Salvador ary Nikaragua ihany.
miaraka amin'ny zavatra hitanao rehetra io.
heey! Nahita izany ihany koa aho tany amin'ny magazay eto Honduras xD
Raha milaza ianao fa tsy mahita mpampanonta kaody Android tena izy dia tsy mahalala na inona na inona momba ny Android
4 dia hoy izy:
Inona no OS miorina amin'ny linux azo apetraka amin'ny takelaka (Asus Transformer infiniti)?
Valio ny 4
Toa efa miasa sy mizara izy ireo. Misy zavatra hafa fantatra momba ny valiny? Ny processeur dia A10, toa avo noho ny nomanina. Tena liana aho fa te hahafantatra hevitra.
Matt dia hoy izy:
Zahao ny vokatra farany Pengpod1040 anay, miaraka amin'ny fahafaha-mametraka sy mihazakazaka Ubuntu Touch! http://www.youtube.com/watch?v=ypqjfOYiyCk
Eguzki dia hoy izy:
Jereo izany, heveriko fa manana horonan-taratasy marobe ianao ary miteny zavatra nefa tsy manamafy. Nampiasa Epad sinoa nandritra ny 3 taona mahery aho ( http://movileschinos.com/zona-de-charla/tablets-pc/5147-epad-zenithink-zt-180-actualizaciones-trucos-aplicaciones-accesorios.html ), izay ametrahako Android 2.1 ary afaka manohana 2.2, izay misy fampiasa USB mahazatra, izay misy hub azo ampifandraisina, ary ao izay ati-doko-totozy Logitech izay ampiasako matetika amin'ny PC no miasa tanteraka.
Mazava ho azy, miombon-kevitra aminao aho momba ny fampiasana tsy mamokatra, zavatra izay tsy eken'ny memo avy amin'ny "filoha" Espaniola Rajoy, izay mihevitra azy io ho fananganana solosaina tsara indrindra hatramin'izay.
Ataoko mihantona eo amin'ny rindrin'ny efitrano fisakafoanana hanoloana ny kalandrie taratasy teo taloha io, satria mamela ahy hametraka fanairana ihany koa hifehezana izay mahandro, hanoratra taratasy fiantsenana hatao, ary rehefa mampifandray ny Wi-Fi aho dia radio ihany koa Hatramin'ny namakiako tantara an-tsary dia afaka namaky azy ireo ihany koa aho (na tsara kokoa, noho ny fanapaha-kevitra) amin'ny PC, ary ny filalaovana Zen Table ping-pong dia efa ela no nahazoako azy.
Izaho koa dia manana kofehy momba ny fametrahana an'i Debian ARM, saingy raha ny marina, nomena ny fetra fitahirizana, tsy fantatro raha mendrika ny korontana ...
Valiny tamin'i Eguzki
Mandraisa andraikitra: Fanentanana nataon'i Google ho an'ny tranonkala misokatra
Kazam - Fitaovana pikantsary tena tsara